Date My Pet » Matauriro Aungaita A Woman Online - From A Vomukadzi Perspective
Ndisati ndaroora ndaratidzwa wangu wakanaka mugove paIndaneti kufambidzana, kusanganisira vakawanda e-mail kubva zvinogona suitors paIndaneti. Ini chaizvo akawanepi kuona zvakanaka, vakaipa uye yakanyangara. Uye handina chatted neruzhinji Shamwari dzangu pamusoro dzavo zvakaitika paIndaneti kufambidzana. Nyaya iyi ipfupiso chii anoshandira zvakanaka kwenguva yokutanga e-mail mumwe mukadzi uye chii chinoita ropa redu run chando uye maoko edu akurova Kudzima kuguma ndima pamberi!
Regai kuva noushamwari - Zvinoita pachena uye ungadai kushamiswa sei varume vakawanda kukanganwa ichi pavanenge kutumira yavo yokutanga e-mail. Zvinoita sokunge musoro wokuratidza kuuropi anotora pamusoro uye vanoda vawane kodzero mabhizimisi (kutaura parunhare / kudanana kana pabonde). Zvinosuruvarisa isu vakadzi hadzishandi kuti nzira. Tinoda kunyudza chigunwe yedu uye tione sei tinonzwa kutanga nemi. Tinoda kuti romanced uye kuwana kukurukurirana noushamwari uye kutarisirwa kubva kwamuri. Funga nezvazvo sezvo 'achidziya wakatibudisa' kana uchifarira. pachena nguva dzose ane ushamwari, uchikurukurirana e-mail (kunyanya refu) uye imi vanozowana mhinduro dzakawanda.
Ko vanorichengeta chiedza uye zvinofadza - Pane nepakati pakati anonakidza / pfungwa ichitora uye parusvingo / kure-kuisa. Ndinoziva kuti anogona kunzwa sokuti dzvinyiriro kana uchiedza kunyora buri akanaka e-mail. Mazano akanakisisa Ndinogona kupa kuva pachako. Verenga chikamu pazasi sei kudzivisa kuva anofinha uye pano tiri vaviri mazano kuti akubatsire undozviratidza hunofadza uye kumurega azive imi munokosha achipindura. Verenga his profile nokungwarira uye vataure chinhu chamunoona ikoko. Rondedzera kuidzosera chinhu wakambofurirwa kana zvichibvira kusika akwirwe. Compliments vanoshanda zvinokuriritira havasi overdone uye vari zvechokwadi. Imwe kurumbidza duku inonaka kuti kutanga e-mail. Unogona zvakare nezvechimwe chinhu chaitika kwamuri zuva rako, chinhu chinoratidza zvishoma ndiwe. Kana uri kusetsa mukomana kunzwa vakasununguka kushandisa zvishoma kusetsa, chete Usaita naro. Dry zvinosetsa anogona nyore kunzwisiswa vachishandisa e-mail. Vakadzi anobatana kuburikidza manzwiro uye kugovana ruzivo, uye kana iwe unogona kusika akwirwe naye muri hafu nzira ikoko.
Ita vanorichengeta pfupi - Kunyange zvazvo tichida kuti kuva noushamwari uye mafaro hatidi rondedzero. A peji yose kunyora zvingangowedzera kuzotirega kurara kana tikariverenga zvachose, Zvisinei riveting zvingava. Panguva yakanakisisa tinogona skim kuriverenga uye tichava kutonga uye vanonetseka kana uri vanozviriritira yakazara kana isu kuzarura e-mail kuona peji yose kunyora! Your E-mail anofanira kuva nyore uye nyore kwatiri kuti kuverenga, izvo zvinoreva pfupi uye kutarisirwa ichitora. Enda nokuti unhu pamusoro uwandu. A shoma pfupi uye impactful ndima uye kumurumbidza ari tikundikane ubudirire.
Regai kufinha - OK I kuona zvingava zvakaoma kuziva zvokutaura, saka ndava kukupa vaviri anokurumidza zvahungava hwakaita. Kuchifinha ari kunyora mazita yemavara nezvako zvakadai sepurogiramu yenyu unhu, kana kutumira shoko iro chete anomubvunza kana iye ari nokuda kutaura kusina nemamwe mashoko. Kana iye asingadi kuwana vanonzwa kuti unhu wenyu e-mail iye haazorambi kuziva kana achida kutaura newe. Uye iye ndizvo chete kwete kunetsa kupindura. Unoda naye kunzwa vachisungirwa kunyora shure. Usangoita nyorazve yenyu Profile, iye achava verenga kuti kana iye anofarira.
Regai kuva cheesy - varume vakawanda overcompensate uye edza zvakaoma. Izvi zvinogona kutarira akafanana pamusoro-kushandiswa compliments uye / kana kusetsa, uye nguva dzose paanouya kure akanakisisa sezvo cheesy, uye akaipisisa wakaipa. Nyora kwaari sokunge uri kutaura neshamwari hadzi, kuti kunokutadzisa kungokurumidza kusununguka uye kuwira mupfungwa yakatarwa kuedza zvakaoma kufadza naye. Zvinosetsa uye compliments asi zvishoma. Kufanana munyu inoita zvokudya nani zvakanaka chete kana kushandiswa zvishoma, chete zvinoshandawo pano.
Regai nyora dzako zvinodiwa zvose - Dzimwe nguva vanhu vachava nyora zvinhu zvose vari kutsvaka mune mukadzi wokutanga, e-mail. Uye dzimwe nguva vachava nyora zvose unhu kuti havadi (kunyange kuipa - vachadedera!) Izvi anouya kure sezvo chandagwinyira uye achatsausa mukadzi chando. Iye angangotadza kupindura kana ukaita izvi.
Regai gang kubvisa vamwe vakadzi iwe wakasangana paIndaneti - Zvinosiririsa ichi zvakare kwaiwanzonzwika zvokufambidzana yangu mazuva paIndaneti, uye nguva dzose akatendeuka ini chando. Zviri kusagadzikana chaizvo kuti mukadzi kuteerera murume slagging kure mumwe mukadzi iye yazvakanyorwa. Kumashure kwedu pfungwa tiri kushamisika kana isu vachabatsirana zvinoitirwa sezvo wake uye zvinoita kuti tinzwe pane tenderhooks kushamisika kana uri kuva sezvo kutonga isu sezvo maiva pano. Dzivisa ichi sezvinoita denda.
Regai kutaura zvepabonde rokutanga e-mail! - I kunzwisisa kuti kana uchiona mukadzi anoyevedza munofunga chaiko, uye hapana chakaipa ichi. Zvisinei isu vakadzi vari chaizvo kunzwa nezvokuberekwazve aswedera setsikawo zvepabonde. Vakadzi vakawanda vanoshandisa paIndaneti kufambidzana paIndaneti, ichi hachisi chikonzero chikuru tiri ikoko, tiri kutsvaka kudanana uye / kana kuti upenyu mumwe. Ndinoziva ndiye wechokwadi vakawanda nevarume vari kudanana panzvimbo zvakare, uye zvinosuruvarisa panewo varume vazhinji vari chete ikoko nokuti vanoda kuti vakaisa. Uye radars vedu vari sensitively yakanyatsorongwa kuti kuona vanhu ivavo. Ticharamba nokukurumidza dzokuongorora navo kunze, saka tisakanganiswa wakanyorwa somumwe 'Varume ivavo'. Dzivisa kutaura chinhu zvebonde yako yokutanga e-mail. Ndinoziva kuti kune zano kunze uko kubva munhurume 'kunhonga vemifananidzo' izvo anotaura nezvokuva panova uye zvepabonde makakatanwa, uye izvi ndizvo zvose zvakanaka uye zvakanaka, Zvisinei yangu maonero zvikasashanda nokuda paIndaneti kufambidzana. Kanenge chete anoshanda kana waita imwe nzira. Fun kunyepedzera wakanaka, asi imi musingadi kuita zvakare kuti Danho kana mauya mhiri zvakare zvebonde enyu okutanga kukurukurirana. To isu vakadzi zviri crass. Zvinoita sokuti yokudimbudzira uye tinotenda tiri mumwe vakawanda uchiedza nzira iri. yeuka, iye anoda kunzwa chinokosha. Shanda kutanga pamusoro kubatana, ipapo vamwe zvinyoronyoro kunyepedzera.
Kupfuura zvose kuwana pfungwa dzako akaisa yakarurama - Iye angava hwokudenga, uye yeuka iye unongova mukadzi mumwe kubva zhinji. Kana uri mumatambudziko unobatanidza nevakadzi paIndaneti uye kuwana mhinduro mashoko ako, tarisa kwako pfungwa wakaiswa kutanga. Uri kunzwa wakaora? Unoziva tariro yenyu zvose munzvimbo imwe e-mail kana iwe ugozvitumira? Kana zvakadaro ichi vachauya kuyambuka ari e-mail uye achaisa vakadzi kure. Basa iri chivimbo yako uye pfungwa norutara zvokuti unoziva pane zvakawanda zvaunogona kuita nokuti imi. misi Your achauya uye migumisiro ipi 1 E-mail hakusi kukosha. Izvi zvichaita kuti kukwanisa kutumira mafaro, vave nechekuita uye chiedza unovhunduka mashoko achawana mhinduro yakanaka.